‘लकडाउन’मा तनाव मुक्त रहन यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् ! « Sajilokhabar
‘लकडाउन’मा तनाव मुक्त रहन यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् !
काठमाडौँ, १२ चैत । विश्‍वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि अहिले नेपालमा लकडाउन लागू गरेको छ। नेपालमा सरकाले चैत्र ११ गतेदेखि चैत्र १८ गतेसम्मलाई लकडाउन गरेको हो।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले चैत्र ९ गते १४ घन्टा जनता कर्फ्यू लगाएको थियो । मंगलबारबाट फेरी कर्फ्यू लगाएको छ।